China AIRPOLE Commercial Large Pedestal / Stand Fan Manufacturing and Factory | Kale
AIRPOLE Commercial Large Pedestal / Stand Fan
KALE Energy Saving AIRPOLE Pedestal Fan misy savaivony 4.2m
Airpole andian-dahatsoratra mpankafy an-tongotra dia matetika ampiasaina amin'ny toerana ivelany sy ara-barotra. Ny savaivony ny mpankafy dia mety ho mihoatra ny 4 metatra, ary ny propeller lehibe mihodinkodina misy fiantraikany lehibe hita maso, izay tsy hay hadinoina. Izy io dia fantson-davenona PMSM lehibe mitsitsy sy mitsitsy tontolo iainana 4.2m.
Ny endrika ankapobeny amin'ny andiany Airpole dia toy ny elo, miaraka amin'ny foto-kevitry ny famolavolana andian-dahatsoratra maotera, izay mahatonga ny fampiharana malalaka kokoa. Ny Airpole dia nahazo mari-pankasitrahana IP55, izay ahafahan'ny Airpole ampiasaina any ivelany.
Izy io koa dia natao ho an'ny olombelona ho namboarina araka ny takian'ny mpampiasa, ka mahatonga azy io hifanaraka amin'ny manodidina, stylish, mirentirenty ary maoderina, modely malaza sy safidy hendry.
Airpole dia be mpampiasa amin'ny Fitness foibe, fampirantiana, lehibe fialam-boly zaridainam-panjakana, seranam-piaramanidina sy ny fiara showroom. Airpole no safidy tsara indrindra ho an'ny zaridaina fialamboly sy toeram-pivarotana.
Airpole andian-dahatsoratra mpankafy mampiasa andriamby synchronous maotera maharitra, izay mavitrika, tena mahomby, maharitra ela, ambany tabataba, indrindra fa ny endri-javatra ny hery Output ny vondrona dia afaka manao ny mpankafy ho ampiasaina amin'ireo toerana amin'ny fepetra hentitra ny habeny & lanja. Ny endri-javatra tena tsara dia mahatonga ny mpankafy anay hanana fampiharana marobe, toy ny amin'ny sehatry ny fanaraha-maso indostrialy, ny indostrian'ny fiara ary ny aerospace.
Ny Airpole dia mampiasa véctor avo lenta sy teknolojian'ny mpitatitra matetika mba hahatonga ny mpankafy manomboka milamina sy mihazakazaka tsy misy feo. Mandritra izany fotoana izany, ny rafitra fanaraha-maso dia manampy ny mpankafy hanana fiainana lava, ny modely dia nahazo valiny tsara avy amin'ny mpanjifanay ary mora ampiasaina, mitahiry fotoana, vola ary fikojakojana maimaim-poana.
Magnalium kilasy fiaramanidina mahery vaika, paiting fluorocarbon
Ny surface dia natao tamin'ny pneumatic fan lelany
Kale Airfoil Blades ™ vita patentina miaraka amin'ny rafitra manohana ny taolan-tehezana ao anatiny, manatsara ny tanjaky ny lelan'ny mpankafy ary misoroka ny fihenan'ny rambony ary ny fahaverezan'ny harerahana amin'ireo singa mampifandray.
2.0Amps / 220V
teo aloha: BOREAS II 5 Blades Industrial Ceiling Fan
Manaraka: AIRFREE Industrial / Commercial Wall Mounted Fan
Mpankafy mijoro goavambe
Haingam-pandeha mijoro Fan
Mijoroa Fan Air Cool